काठमाडौँमा डरलाग्नेगरी बढे कोरोना संक्रमित, अहिलेसम्मकै धैरै आज भेटीए, तर सर्तकता खोई ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँमा डरलाग्नेगरी बढे कोरोना संक्रमित, अहिलेसम्मकै धैरै आज भेटीए, तर सर्तकता खोई ?
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा देशभरको कोरोना संक्रमितहरुको दर घटीरहेका बेला काठमाडौंमा भने बढ्न थालेको छ । आइतबार मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा।जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा आजमात्रै २७ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि गरेका छन् । जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ५ जनामा, वीर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा १ जना र शिक्षण अस्पताल महाराजञ्जमा गरिएको परीक्षणमा २१ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो ।
धेरै जनघनत्व भएको र असुरक्षीत शहर काठमाडौँमा यसरी दिनानुदिन संक्रमण फैलिरहँदा पनि सरकार र सारोकारवालाहरुले त्यति चासो दिएका छैनन् । र सर्वसाधारणहरुमा पनि सचेतना नभएका कारण संक्रमण बढेर काठमाडौँमा महामारी नै आउने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै आज देशभर थप २९३ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने २४ घण्टामा १३२ जना निको भई घर फर्केका छन् । योसंगै नेपालमा निको हुनेको संख्या ६ हजार ५४७ पुगेको छ ।
पहिरोले पुरिएर ३ वर्षिय जुम्ल्याहाको गयो ज्यान, मजदुरी गरेर छोरा छोरी पाल्दै आएका बाबुआमा अचेत